Maahmaahyo - BAARGAAL.NET
Maahmaahdu waa hadal murtiyeed ,inta badan ka dhasha waayo aragnimo ama dhacdo qof soo martay dabadeena uu ka reebo erayo xikmadaysan oo cabiraya dhacdadiisa saamayna ku leh nolol maalmeedka bulsho waynta uu af ahaan iyo dhaqan ahaanba la hal maalo. Soomaalidu waxay ku jirtaa dadka aad loogu tilmaamo inay leeyihiin luqad hodan ah oo u suurto galisay inay reebi karaan odhaah nuxur leh oo xambaarsan macna xeel dheer,jirina karta inta ay jiraan dad isticmaala luqadaa. Haddaba waxaa nasiib daro wayn ah , dagaaladii xaq u dirirka ahaa ka dib, luqada soomaaliyeed gaar ahaan suugaanta hadal iyo hawrarba lahayd sida gabayadii, buraanburkii, googaalaysigii, maahmaahyihii , sheekhooyinkii dhalaanka iwm in ay ka baxeen nolol maalmeedka ummada . Maahmaahuhu waxay si aad ah uga muuqan jireen nolol maalmeedka bulshada ,oo had iyo jeer qurxin jiray haasaawaha, gogol fadhiga , iyo hadal maalmeedka joogtada ah eey umaddu is waydaarsanayso. Si loo daweeyo dhibaatadan waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa maahmaahihii inta aanu ka ururin karnay ilaa iminka, wixii kalee aanu ka ururinana waanu ku daraynaa haduu eebe idmoh
868. waraabaa yidhi ulna layla gaadhi waa cayna w ax igama tarto